Chhimeki bhauju lai chikeko - Indian Girls Nude XXX Images
Chhimeki bhauju lai chikeko
Chhimeki bhauju lai chikeko,hot chimeki bhouju sex video,chimeki bhouju sanga chikeko kahani chimeki bhauju ko youn katha,chimeki bhouju saba raatvar sex, nepali bhauju chikeko katha haru.bhouju lai chikda,bhauju ko sexy body,bhauju ko puti,keti chikeko katha haru nepali kt chikeko katha haru.nepali priya_bhalu_thapa chikeko katha haru.didi lai chikeko katha.dai sanga chikeko katha.nepali bhalu chikeko katha nepali youn katha 2015
भाउजु को Boob’s देखेर म निकै उताउलो हुन्थे थिईन पनि भाउजु एकदम SEXY घर नजिकै को प्रेम श्रेष्ठ दाईको बुढी । दाईको Moter bike गएको देखे पछी म गईहाल्थे त्यो भाउजुकोमा । भाउजु पनि मलाई देखे पछी निकै मस्किने गर्थिन । भाउजुको बुबु सङ्ग खेल्ने मेरो दिनचर्या नै बनेको थियो । भाउजुले मस्किदै भन्थिन बाबु धेरै बुबु खेलाउनु हुँदैन गिलो हुन्छ भनेर । अनी मैले सोधी हाल्थे भाउजु प्रेम दाईले चलाउनु हुँदैन र तपाईंको बुबु ? भाउजुले मुख फुलाएर भन्थिन छ्या त्यस्तो नामर्दको कुरा नगर्नु बाबु खाली रक्सिले मातेर आउछ अनी सिधै गर्न खोज्छ अनी छिट्टै माल पनि झार्छ छि छि कस्तो कस्तो बुढा ब्योहोरेर बस्नु पर्छ । अनी खै तपाईंको लाडो कत्रो भएछ बाबु भनेर हेर्थिन मेरो लाडोलाई म पनि मज्जले खेल्नु दिन्थे त्यो श्रेष्ठ भाउजुलाई आफ्नु लाडो । भाउजु भन्ने गर्थिन गुरुङ्गको छोराको कस्तो छिट्टै बड्ने रहेछ है लाडो । BathRoom मा भाउजुलाई म साबुन लगाईदिन्थे अनी भाउजुको बुबु मज्जले माडिदिन्थे भाउजु निक्कै कराउनु हुन्थ्यो उंह उंह …अलिक बेसरी माड न बाबु…उंहु उंहु…. म पनि बेसरी माडी दिन्थे। अनी भाउजुले देखाउथिन आफ्नु पुती बाट निस्केको पानी । भाउजु को पुती भन्दा माथि कालो भुत्ला एकदम धेरै थियो जुन मैले नै खुर्केर सफा गरिदेको थिए । अनी एकदिन भाउजु को घरमा गए म प्रेम दाई निस्के पछी । भाउजु भाडा धुदै रहेछिन म आएको देखेर भाडा माझ्न छोडेर म तिर आईन अनी मलाई आफ्नु Bed room मा लगेर कपडा खोल्न लगाईन र म पनि त्यही चाहन्थे .. छिट्टो छिट्टो सबै कपडा खोले उफ..मेरो त एकदम ठाडो भएको रहेछ लाडो । भाउजुले T.V खोलिन अनी सिरानी मुनी देखी एउटा क्यासेट निकालेर V.C.R मा हालिन । फिल्म सुरु भयो चुस्ने र चाट्ने फिल्म रहेछ …भाउजु छिटो छिटो कपडा खोलेर मेरो लाडो मुखमा चुस्न थालिन …उफ्फ मलाई खपी नसक्नु भयो मैले पनि भाउजुलाई बेडमा पल्टाएर भाउजुको पुती खुब चाट्न थाले । भाउजु यत्ती जोड जोडले कराउन थालिन कि बहिर कसैले सुन्ने डरले मैले भाउजुको मुख नै थुनिदिए । भाउजुले भन्दै थीइन बाबु छिट्टो मेरो पुतिमा आफ्नु लाडो हाल भनेर र मैले पनि भाउजुले भने जस्तै आफ्नु लाडो भाउजुको पुतिमा हाली हाले । 25 minutes हाम्रो घमासन युद्द नै चल्यो अन्त्यमा म स्खलित भए भाउजु पनि आँखा चिम्म गरेर निकै आनन्द मान्दै थिईन । अनी एक चोटि मायाले भाउजुले फेरी मेरो लाडो चुसिदीईन । म फेरी अर्कै संसारमा हराउन पुगे ।
← nepali youn katha 2015	salli lai chikeko sex story (nepali sex story) →